Praiminisitra momba ny fampielezan-kevitra: “Mila porofo ny fisian’ny fampiasana fitaovam-panjakana” | NewsMada
Praiminisitra momba ny fampielezan-kevitra: “Mila porofo ny fisian’ny fampiasana fitaovam-panjakana”
Mandeha ny fampielezan-kevitra, mandeha koa ny resaka ny amin’ny fisian’ny fampiasana fitaovam-panjakana amin’izany… “Mila porofo”, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian.
“Momba ny fampiasana fitaovam-panjakana amin’ny fampielezan-kevitra, raha misy: efa misy lalàna ny amin’izany. Tokony hampiseho porofo ny olona mahatsikaritra izany. Tokony hialantsika ny honohono.” Izay ny nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian teny Mahazoarivo, afakomaly, momba ny hoe fisian’ny fampiasana fitaovam-panjakana amin’ny fampielezan-kevitra.
Mazava ny fandraisan’ny governemanta ny andraikiny. Mino sy manantena izy fa tsy hisy minisitra tsy hanaraka antsakany sy andavany ny toromarika efa napetraky ny governemanta ny amin’izany. Ny zava-dehibe amin’izao fotoana izao, mizotra araka ny fanirian’ny besinimaro ny fampielezan-kevitra. Tsy eto Antananarivo fotsiny izany fa manerana an’i Madagasikara.
“Tsotra ny zava-dehibe tokony hapetraka: mila mijoro amin’ny tsy fitanilana ny fitondram-panjakana. Tsy tokony hisy fitanilana amin’ny fampiasana fahefam-panjakana. Tokony hotarafina amin’izany toe-tsaina sy foto-pisainana izany ny fanapahan-kevitra rehetra”, hoy kosa izy momba ireo angidimby valo tsy mbola nomen’ny Aviation civile de Madagascar (ACM) hisidina.
Misy ny kandidà nametraka fitoriana any amin’ny fiadidiana ny Primatiora ny amin’izany. Tsy iray fa maro izy ireo, izay milaza fa voatsindry ary mahatsapa fa misy ny fitanilana. Anjaran’ny praiminisitra izany fa misy fanjakana eto Madagasikara. Mba tena ao anatin’ny tsy fitanilana ny zavatra atao rehetra, na kandidà iza na iza.
Raha mahatsapa àry ny praiminisitra fa tsy mizotra araka izay fetra eritreretin’ny rehetra izay tsy fitanilan’ny mpitondra izay amin’ny isan-tsokajiny sy ny ambaratonga rehetra: tsy maintsy mandray andraikitra izy, raha mahita fa misy ny fitanilana. “Zava-dehibe ny fahalalahana sy fanajana ny zon’ireo kandidà”, hoy izy.